Iindaba ze-3 ze-Geospatial sector - ii-Geofumadas
Iindaba ze-3 ezivela kwicandelo leeGeospatial
Meyi, 2013 cadastre, Geospatial - GIS, ezintsha
I-BRAZIL: Ukuphathwa kwendalo kunye neendawo zasemaphandleni ziphucula ngokusetyenziswa kwee-geospatial technologies
Ubuchwephesha be-Geospatial, izixhobo ezibalulekileyo zokucwangciswa kwendawo, ziguqula indlela yokuthengisa umhlaba
Uchungechunge lwe zifundo oluya kubanjwa ngoJuni 18 eSa Paulo, eBrazil, liya kufundisa indlela yokusebenzisa ngayo idatha ye geospatial kunye neeNkqubo ze I-Geographic Information (SIG) ukulawulwa kwendawo, ukucwangciswa kwidolophini kunye nolawulo loluntu kunye nolwangasese. Ukubona igridi yeeklasi ze-mini kwaye ukwazi ukubhalisa, iya ku-: http://mundogeoconnect.com/2013/grade/cursos.
El Ikhosi ye-Geo-referencing yeepropati zasemaphandleni iya kuxubusha umthetho omtsha malunga nesihloko kwaye iya kujongana nemiba yobugcisa, njengolu vavanyo lwenzululwazi, umba obalulekileyo kubaphathi bepropati kunye neengcali ezisebenza kunye nophando.
El I-Course kwi-Cadastre yasemaphandleni aseMaphandleni, Ukujolisa kwi Code Ihlathi entsha, iya kuqwalasela imiba esi sixhobo omtsha ulawulo lokusingqongileyo yasemaphandleni, kugxininiswa nemingeni yobugcisa neyolawulo ezinxulumene nokusetyenziswa CAR kunye namathuba abaniki nkonzo, amashishini kunye noorhulumente .
El Inkambo yokuThuthukiswa kweMicimbi yoLawulo loMasipala, iza kuzisa izisombululo zokuphepha iimpazamo kwizigaba zeprojekthi, ukuqesha nokuhlaziywa kweenkqubo zokuqhubela phambili kwiindawo ezikhethiweyo. Ummeli weBrazil Institute of Geography kunye neSketching (IBGE) uya kuba ngumfundisi we I-Course kwi-Infatistructure Infrastructures (IDE), ngokugqwesa kwiqhinga laseBrazil le ntlangano yolwazi lwendawo.
Kwaye, ekugqibeleni, ikhosi-mini iya kubanjwa ngabalawuli ababini abakhethekileyo kwicandelo lezengingqi zengqondo, eziza kuchaza ukuba kutheni kubalulekile ukuphumeza Geomarketing kwiinkampani kwaye zeziphi iingenelo ezinikezayo.
Le khosi mini eziya kuqhutywa njengenxalenye lwenkqubo lwe MundoGEO # Connect LatinAmerica 2013 - Conference and Fair Geomatics kunye Solutions Geospatial - kuza kufuneka iiyure ezintandathu kwaye ziquka isiqinisekiso. Ezi khosi mini zijoliswe iingcali abanqwenela ukufunda izakhelo kwaye izicelo ubugcisa geospatial kunokwenzeka.
Olunye ulwazi kwi-imeyili connect@mundogeo.com kunye ne-55 (41) 3338-7789.
I-TAIWAN: I-SuperGIS Online idibene ne-Microsoft Excel
I-SuperGeo Technologies isandul 'ukuba i-Add-inn izakuqaliswa okuza kuququzelela ukuhlanganiswa kwe-Excel kwisicelo se-SuperGIS kwi-intanethi.
Ngako oko abasebenzisi ungenza yesiqhelo ezikholisa kuyenza Microsoft Office Excel 2010, ezifana ukwenza iitshathi, iimephu weendawo, iingxelo zeenkcukacha-manani ngesicelo amandla geographical ngeenkonzo ezinikezelwa yi SuperGIS Online.
SuperGIS Online for Excel Dibanisa-in, abasebenzisi ukudala neetafile afumane iinkcukacha ezifanelekileyo ezifana amagama counties, izixeko needolophu kunye zilungelelanise ezithile, kunye neenkcukacha ukubonisa abangaboniyo kunye neenqobo unique, Ukuphumelela imibala, waphumelela iisimboli, njl .
I-SuperGIS Online iyatholakala kwihlabathi lonke, nangona kunjalo ngoku i-Excel Add-in kuphela kubaxumi eTaiwan.
Olunye ulwazi malunga neSIG zeSGG izicwangciso zeseva, tyelela:
FRANCE: Ifowuni ye-GIS, i-SuperSurv i-3.1 inceda ukuphucula amanzi okusela kunye neenkqubo zokucoceka eFransi
SuperGeo Technologies, uye wachaza ukuba SuperSurv 3.1, mobile GIS software izixhobo Android, uye wanyulwa Dignoise Regie des Eaux ukuba enze nokuqokelelwa kwedatha entsimini ukuze kufezekiswe izifundo kunye nokuphuculwa amanzi aselwayo ugutyulo ngo Digne-les-Bains, France.
Equlunqwe libhunga leedolophu laseGigne-les-Bains, i-Dignoise Regie des Eaux ijolise ekusebenzeni kwenkqubo yamanzi okusela kunye neenkonzo zokucoceka. I-teknologi ye-GIS iya kuvumela umasipala ukuba adibanise ngokugcwele idatha ye-hydrological kunye nokusingqongileyo kunye nokulawulwa komgangatho nokuphucula okuqhubekayo kwamanzi angaphantsi komhlaba kwiindawo ezikufutshane nophuhliso oluzinzileyo lwemithombo yamanzi.
Ndikunye SuperSurv 3.1, abasebenzi Dignoise Regie des Eaux uya kukwazi ukunyenyisa imigaqo usebenzisa data ngexesha lenene kufutshane nokukhuthaza ukusebenza ekulawuleni amanzi ixesha elide kunye nolawulo lomgangatho wamanzi lokuqhuba . Ngenxa yoko, abahlali abakwazi aphile amanzi okusela efanelekileyo kunye nococeko.
I-Géo.RM yinkampani yokubonisana ne-GIS ejongene nokubonelela ngezixazululo zeGPS kunye neemephu ze-GIS ukuhlangabezana neemfuno ezahlukahlukeneyo zoshishino. Ngokusebenzisana noGeo.RM, i-SuperGeo iya kukwazi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi abathetha isiFrentshi ngeesofthiwe ezintsha kunye ne-SuperGIS iinkonzo.
Olunye ulwazi malunga ne-SuperSurv 3.1, tyelela:
Le nkonzo ifinyelela kwiiGofumadas ngenxa yeZatocaConnect, ngeenkonzo zayo Z! Umxholo.
UZatocaConnect ungumlingani weqhinga lomhlaba wonke MundoGEO # Xhuma
Post edlulileyo«Edlulileyo Cartitas
Post Next I-15 akhawunti ye-Twitter ukulandela ... ngonyaka kamvaOkulandelayo "